Alefaso ny dika mitovy amin'ny mpandinika avy amin'ny Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny tenifototra dia mampivandravandra ny mpandraharaha ara-barotra izay antony mahatonga ny sasany amin'izy ireo ho sahiran-tsaina amin'ny fanombohana SEO. Amin'izao fotoana izao dia misy orinasa misy orinasa mihambo ho manolotra serivisy ahafahana mahazo vohikala ho any amin'ny topan'ny vokatra Google. Fanontaniana toy ny hoe ny iray amin'izy ireo dia mandainga ary tsy misy izany, na ny fampiasam-bola ao amin'ny SEO dia safidy tsara - application company software. Amin'izao lafiny izao, ny Strategist ao amin'ny Content Semalt , Natalia Khachaturyan, dia manolotra vahaolana tsotra ho an'ny olan'ny fametrahana:
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahazatra loatra ny fampiasana teny fanalahidy ao amin'ny SEO
Tamin'ny 2009, manazava i Matt Cutts fa tsy mampiasa teny sora-baventy intsony i Google amin'ny ampahany amin'ny algorithm. Na dia teo aza izany fampitandremana izany, mbola nanohy nanamatroka ity hevi-diso ity ny olona fa tena ilaina ny SEO. Mbola mampiasa ny meta tag amin'ny teny fototra izy ireo na dia tsy manaiky tanteraka azy ireo aza i Google.com.
Raha mbola teo amin'ny sehatry ny zazakely ny SEO, dia anisan'ireo olana fikarohana nokarohaina ny fiezahana hiatrehana izany dia ny teny fanalahidy. Tamin'ny voalohany dia tsy afaka nifantoka afa-tsy ireo anton-javatra teo amin'ny pejy aloha ny milina fikarohana raha vao nahavita nanamora ny fifehezana ny pejy faobe toy ny fampiasana backlinks . Ny tenifototra dia anisan'ireo singa hita ao amin'ny pejy izay hametrahana ireo tranonkala mpikirakira ny tranokala amin'ny alàlan'ny tranonkala mampiasa tenifototra meta tag.
Tonga dia nampiasain'ny hetsika antsoina hoe 'teny filamatra fototra' ny tetika. Ny famokarana tenimiafina dia iray amin'ireo SEO marobe ampiasain'ny tetikady Black Hat. Olona maro no nahazo rivotra amin'ny fomba ahafahany mamorona teny fanalahidy maro (ny sasany amin'izy ireo dia tsy misy dikany) ao amin'ny marika mba hanamora ny fahitana ny mombamomba azy. Tsy afaka nahita ireo teny fanalahidy ireo ny mpampiasa, saingy nitarika ny famoahana ny valin'ny fikarohana diso sy tsy marina.
Ny valintenin'i Google dia ny tsy firaharahiana ny meta tag nandritra ny fampidiran-tserasera manontolo ary mbola nanohy nanao izany mazava izany. Na dia heverin'ny olona ho toy ny angano aza izany, ny fahamarinan'ity raharaha ity dia tsy mampiasa adiresy teny meta intsony i Google ao amin'ny tranonkalany..
Raha tsy miraharaha ny meta tag Google, midika ve izany fa tsy hanimba ny tranonkala ny teny fanalahidy fototra?
Mifanohitra amin'ny finoan'ny besinimaro, manimba ny tranonkala ny teny fanalahidy fototra. Tahaka ny vidin'ny fàfana maoderina dia tsy manome valiny SEO, fa mampitombo ny fahafaha-misoroka izany. Nahita fomba iray hitadiavana karazana tenimiafina hafa i Google.
Nanapa-kevitra ny cutts fa ny fivoahana ny algorithm Penguin amin'ny taona 2012 dia hampihena ny fisian'ny toerana misy ireo heverina ho manitsakitsaka ny torolàlana momba ny kalitaon'ny Google. Iray amin'ny tari-dàlana Google izay efa ela no teo amin'ny toerany dia ny fialàna amin'ny famoronana tenimiafina. Milaza izy io hoe 'Aza entin'ny pejy tsy misy dikany. "
Manome hevitra izy io fa na dia tsy mampiasa ny teny fanalahidy ho an'ny tanjona SEO aza i Google, dia mbola mikaroka ireo loharanom-panafody sy fanodikodinana ny algorithm.
Ny tetikady mainty hafa dia ahitana:
Soratra tsy hita. Maro amin'ireo spammers no mamorona teny fanalahidy ao amin'ny lahatsoratra amin'ny alalan'ny mifanitsy amin'ny loko miaraka amin'ny loha-takila. Ny hevitra ao ambadik'izany dia ny manafina ireo teny fanalahidy ireo amin'ny mason'olombelona, ​​fa tsy avy amin'ny milina fikarohana. Amin'ny alalan'io, manantena ireo spam fa hampitombo ny lanjany amin'ny karoka fikarohana raha tsy manova ny fisehon'ny tranonkala.
Ny soratra miafina sy ny rohy. Hanafina andinin-tsoratra hafa ao ambadiky ny sary na mampiasa ny Cascading Style Sheet ho toy ny fanazavana amin'ny teny fanalahidy. Izy ireo dia mampiasa marika izay ahafahana manafina azy ireny ao amin'ny sehatra tsirairay, kanefa mitazona azy ireo mora foana amin'ny fikarohana
Ny teny fanalahidy manaparitaka ivelan'ny tenifototra meta tag. Na dia mihoatra noho ny fampiasana teny fohy amin'ny teny hafa amin'ny tranonkala aza dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toerana fa tsy hanatsara ny isa. Mitandrema mandrakariva ny fifandanjana eo amin'ny fanoratana ny maha-olombelona ary ny milina fikarohana dia manome antoka fa ny votoaty rehetra dia mamaky mazava tsara.
Fanamboarana duplicate. Miresaka ny rehefa mamerina ny lohateny sy ny famaritana meta manerana ny tranonkala ny mpampiasa. Google dia tsy mihevitra izany ho toy ny votoaty averimberina fa mihevitra fa ilaina izany. Etsy ankilany kosa, izy io dia mitahiry izany ho toy ny votoaty duplicated ary manala izany avy amin'ny valin'ny fikarohana.
Aiza no misy antsika?
Ny fomba fijery malefaka amin'ny SEO dia maro karazana. Na dia izany rehetra izany aza dia midika izany fa mifantoka be amin'ny votoaty nomena sy ny maha-zava-dehibe. Ny olona dia tokony hanova ny fomba fijerin'izy ireo ny SEO ary hiala amin'ny fampiasana teny fanalahidy hitadiavana teny.